10/04/2018 - Page 2 sur 4 -
Telo volana fahatelo : Hafantoka amin’ny famitana ny fandaharam-pianarana sy famerenana
Taorian’ny fialan-tsasatry ny paska dia miverina an-dabilio avokoa ny mpianatra, nanomboka ny 5 aprily teo, ho an’ireo tratran’ny fampiatoam-pianarana, noho ny valanaretina pesta sy rivodoza AVA. Manomboka ny telo volana fahatelo mamarana ny taom-pianarana 2017-2018. …Tohiny
Ambohidrapeto : Lehilahy 15 taona notapahina ny filahiany
Ahiana tanteraka ny fahasalaman’ity tovolahy kely manodidina ny 15 taona notapahina filahiana voalaza fa nanolana zazavavikely teny Ambohidrapeto ity. Araka ny loharanom-baovao dia ny alarobia lasa teo no nitrangan’ity toe-javatra nampivarahontsana ity teny an-toerana, izay …Tohiny
NOHO NY FITIAVAN-TENA : Miantso fanonganam-panjakana ny Seces
Mivily any amin’ny tsy tokony ho izy intsony ny fitakiana ataon’ireo mpikambana ao anatin’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo (SECES Antananarivo). Tsy nijanona tamin’ny fitakiana tombontsoa manokana intsony mantsy izany fa …Tohiny
Ankatoky ny fifidianana : Milalao fiangonana i Andry Rajoelina
Tsy filoham-pirenena amperin’asa, tsy mpiasam-piangonana na raiamandreny manana asa ao amin’ny fiangonana, tsy mpitety fiangonana mpanao asa soa, saingy kosa mpilatsaka ho fidiana i Andry Rajoelina ka mitady ny fon’ ny mpino indray. Io no …Tohiny